Lacagaha Shillin Soomaaliga ee xilligan sii qiima dhacaya maxaa sabab u ah, yuuse dan u yahay ???
Loading...	Home Wararka Lacagaha Shillin Soomaaliga ee xilligan sii qiima dhacaya maxaa sabab u ah, yuuse dan u yahay ???
Lacagaha Shillin Soomaaliga ee xilligan sii qiima dhacaya maxaa sabab u ah, yuuse dan u yahay ???	Monday, 18 February 2013 21:22	Shillin Soomaaliga ayaa waxa uu noqday wax aan qiimo lahayn, waxaana booskii shillin Soomaaliga galay doollarka Mareykanka oo guud ahaan dalka Soomaaliya isticmaalkiisu ku baahay.
1. Dowladda oo awood u yeelanaysa inay lacago cusub oo sarifaad leh soo daabacdo. 2. Dowladda oo ay u sahlanaanayso inay si fudud lacagahaas ugu baahiso dalka oo dhan.
12. Shacabka oo helaya kalsooni xagga qiimaha maciishadaha oo wax go’an noqonaya. Intaas iyo in ka sii badan oo shacabka iyo dowladdaba faa’iido u ah marka la helo ayaa waxaa sumcad dhaqaale helaya dadka iyo dalka Soomaaliyeed, waxaana qiimo yeelanaya lacagaha shillin Soomaaliga oo noqonaya kuwo sharci ah oo aan la daabacan karin, iyadoo muhimaddu tahay lacagaha cusub ee dalka loo soo wado oo ku soo beegmaya xilli tii Kun-kunka ahayd ay sii daba gurmayso qiimaheeduna sii dhacayo, shacabkuna ay sii nacayaan.